ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: ကိုချစ်ဖေ တပ်ကြပ်ကြီး
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 5:59 PM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း, February 23, 2010 at 8:08 PM
Nge Naing, February 23, 2010 at 8:23 PM
ကျွန်မက ကိုချစ်ဖေတယောက် စစ်တပ်ထဲဝင်ဖူးတာလား ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ထောင်သားအချင်းချင်း အုပ်ချုပ်တဲ့တဲ့အဖွဲ့မှာ စစ်တပ်က ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ပေးထားလားလို့ စဉ်းစားနေတယ်။
ကလူသစ်, February 24, 2010 at 5:35 AM
(၂၀၁၀ ဆိုတော့ ဗိုလ်ချူပ်လောက် ပစ်ခေါ်ထားမှ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်) ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ...ရှင့်မှာလဲ အကြွေးတွေနဲ့ ကျမမှာလဲ ခလေးတွေနဲ့ ဖြစ်နေလို့၊ ((((( မီးလောင်နေတယ်))))))))))) ((((((( မီးလောင်နေတယ်))))))))) လောက်ပဲ အော်နိုင်ကြောင်း သတင်းပို့ပါတယ်။
KZကေ, February 24, 2010 at 7:30 AM
ဂျူနို, February 24, 2010 at 11:15 AM
ဟုတ်တယ် ကိုချစ်ဖေရေ ကိုယ့်အိမ်တော့ လွတ်သေးတယ် ကိုယ့်ရပ်ကွက်တော့ လွတ်သေးတယ် တွေးပြီး အေးဆေးနေလို့ကတော့ အကုန်ပြာကျမှာပဲ။ ခုတောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ လောင်ကုန်ပြီ။
ထောင် အတွေ့ အကြုံတွေ ရေးပါအုန်း။
kiki, February 25, 2010 at 3:53 AM
...(နာရေးသာရေးသတင်း ကတော့ မှန်မှာပဲလေ) ..
ခု နာရေး သတင်းတွေတောင် မှန်တာ မထဲ့ နိုင်ကြတော့ဘူး တပ်ကြပ်ကြီး ချစ်ဖေ ရေ...
ရှေ့ တန်းမှာ ကျ(ဆုံး) သူ တွေ နာရေးထဲ ပါတာ တွေ့ ဖူးလို့ လား .. . ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်က ဘာကြောင့် သေတယ်.. ဘယ်မှ သဂြိုလ်မယ် ဆိုတာ တွေ .. တွေ့ဖူး ပေါင် တော် ...
တပြည်လုံး .(လျှပ်စစ်)မီးမရတဲ့ အရပ်တွေမှာ အားလုံး မီးလောင်နေကြ ပါရောလား... တို့ မီး ရှို့ မီး ပိုဆိုးသေးတယ်နော် ..
ထောင်ဘယ်တော့ ကျအုံးမလည်း.ကိုချစ်ဖေကြီး ရေ .. အိမ်ထောင် ပြောတာပါ ..း))
တောင်ပေါ်သား, February 25, 2010 at 8:01 PM
ဖွားကီ ပြောတာ မှန်၏ ကိုချစ်ဖေ ထောင်ကျတော့မယ် အိမ်ထောင် အဟီးးးး
ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ မုန့်တီစားဖူးခဲ့တယ်ပေါ့ ဗဟုသုတ ရပါတယ် အဲ့လို အတွေ့အကြုံတွေ မျှော်နေမယ်
ကိုလူထွေး, February 26, 2010 at 10:43 AM
“လုထွင်းမှ ချက်ဖွေ.. လုထွင်းမှ ချက်ဖွေ အသံ ၅ ကြားလား.. ကြားရင် အကြောင်းပြန် ဒါပဲ”
တခါတလေ စဉ်းစားမိတယ်... တပ်ထဲဝင် အပစ်ကျင့်ပြီး တပ်ချုပ်ကြီးဆီ ဦးတည်ရ ကောင်းမလားလို့...
Unknown, February 26, 2010 at 10:58 AM
အစ်ကိုတိုးကြီးတစ်ယောက် ဘယ်ပျောက် ??????
လိုင်, February 26, 2010 at 2:09 PM
khun, May 22, 2010 at 9:15 AM
ဗိုလ်ကြီးက ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းရေးသွား တော့ ကျနော်လည်းအလွမ်းသင့်သွားတယ်ဗျာ ကျနော် ကတော့2000-2005ကျော်ထိနေလိုက်ရတယ်။ 13/1 17/1 နဲ့ပါ.ရောက်ပြီးမကြာဘူးအိုင်စီအာစီ အဖွဲ့တွေနဲ့ ကြုံလိုက်တယ် ထောင့်ပံကြေး တီပွီ သတင်းစာ စာအုပ် တွေ တော့ဖတ်လို့ရတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့ ဗိုလ်ကြီးတို့ လောက်တော့မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာ..အဲဒီကဆုံခဲ့တဲ့လူတွေကို တော့ခုထိမေ့မရနိုင်ပါဘူးဗျာ.ဘ၀တူသားတွေကိုသတိယ နေလျှက်ပါ..